TensorFlow na Pytorch: Ihe mepere emepe AI Platform | Site na Linux
TensorFlow na Pytorch: Ihe eji emeghe Open AI
TensorFlow na Pytorch enwere 2 nyiwe «Inteligencia Artificial (IA)» de «Código Abierto». Nke mbu bu nke Google mebere nke abuo na Facebook. Ma, Gịnị bụ ọgụgụ isi? La «IA», dị ka anyị kwuru n'isiokwu bu nke a na-akpọ "Anọ Industrial mgbanwe: The ọrụ nke Free Software na a ọhụrụ oge" bụ otu n'ime ọtụtụ teknụzụ ọhụụ nke na-agbanwe ugbu a usoro ọha mmadụ nke XNUMXst narị afọ.
Na nkenke, ị nwere ike ịkọwa «IA» dị ka nkà na ụzụ n'ihi Nchikota nke algọridim Ezubere maka nzube nke mepụta igwe (sọftụwia) na-ewetara otu ihe ahụ ike na mmadu.
La «IA» na-eme ka o kwe omume n'ihi na igwe na-amụta site na ahụmịhe nke ha ma ọ bụ nke ndị ọzọ, megharia ma gbanwee ihe omuma ohuru na onodu obibi, ma rụọ oru dika mmadu ozo. Na mgbakwunye, teknụzụ a na-esonyere ma ọ bụ n'aka ndị ọzọ, ọkachasị 2 mara «Aprendizaje Profundo (Deep Learning)» y «Procesamiento del Lenguaje Natural (Natural Language Processing)». Na «Big Data» a na-ejikwa ya ebe niile.
N'ụzọ dị otú a, na teknụzụ ndị a na-ekwe ka kọmputa na robot dị ugbu a, ma eleghị anya otu ụbọchị Androids zụọ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma, ịrụ ọrụ ụfọdụ dị ka ịhazi ọtụtụ data, ịmata usoro dị na data, ịrụ ma ọ bụ idozi egwuregwu ma ọ bụ ọrụ ọrụ, ịgagharị (ịkwọ ụgbọala onwe ya) ma ọ bụ ịkwaga ihe gaa ebe dị iche iche, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
1 Ardị ọgụgụ isi (AI)
2 Nkọwapụta Open Source AI
2.1 TensorFlow: Kedu ihe ọ bụ na gịnị bụ njirimara ya?
2.2 Pytorch: Kedu ihe ọ bụ na gịnị bụ njirimara ya?
2.3 Ndị ọzọ dị
Ardị ọgụgụ isi (AI)
Na nkenke, AI nwere ike ịba uru nke ukwuu iji mepụta:
Usoro ndị na-eche dị ka ụmụ mmadụ: para machiini nke ihe omume, dika: Ime mkpebi, idozi nsogbu na mmụta. Ihe Nlereanya: Rakwara ederede.
Sistemụ nke na-eme ka mmadụ: Iji mepụta igwe ịrụ ọrụ yiri ka ndị mmadụ si eme. Ihe Nlereanya: Robots na Androids.
Usoro ndị na-eche echiche n'echiche: para ulateomie echiche ezi uche dị na ya (nghọta, nyocha, na omume) nke ụmụ mmadụ. Ihe Nlereanya: Sọkachamara usoro.
Sistemụ na-eme ihe n'echeghị echiche: para jiri ezi uche i emomi ndị omume mmadu. Ihe Nlereanya: Slabndị maara ihe.
Nkọwapụta Open Source AI
TensorFlow: Kedu ihe ọ bụ na gịnị bụ njirimara ya?
Ọ bụ ebe a na-eji ọgụgụ isi ọgụgụ isi eme ihe n'ụwa
Google (Brain) kere ya maka iji ya rụọ ọrụ ma wepụta ya n'okpuru akwụkwọ ikike Apache 2.0 mepere emepe na November 9, 2015, na-anọchi ụzọ mechiri ụzọ ya, DistBelief.
Ọ dị ka ọbá akwụkwọ mmeghe emeghe maka mmụta miri emi, nke dịkwa maka Windows, Linux, MacOS, na nyiwe mkpanaka gụnyere gam akporo na iOS.
Ebumnuche ya bụ igbo mkpa nke sistemụ nwere ike iwulite ma zụọ netwọkụ ntanetị iji chọpụta ma kọwaa ụkpụrụ na mmekọrịta, nke dị ka mmụta na ntụgharị uche nke ụmụ mmadụ.
A na-eji ya ugbu a maka nyocha na mmepụta nke ngwaahịa Google, dochie ọrụ nke onye mechiri emechi ụzọ, DistBelief.
Aha ya sitere na arụmọrụ nke netwọkụ ntanetị nke sistemụ a na nchịkọta data multidimensional nke a na-akpọkarị: Tensors.
Cheta na: Enwere ike inweta ozi ndị ọzọ gbasara ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Pytorch: Kedu ihe ọ bụ na gịnị bụ njirimara ya?
Ọ bụ ebe a na-ejikarị arụ ọrụ ọgụgụ isi nke ụwa.
A maara nke ọma maka ịbụ ọbá akwụkwọ mbu nke Facebook maka ngwa mmụta miri emi.
Ọ bụ ngwungwu Python nke emebere iji mee atụmatụ ọnụọgụ site na iji mmemme nke ihe ntanetị. Na mgbakwunye, ọ na-eje ozi dị ka onye nnọchi nke ngwugwu Numpy.
Ọ na-enye ohere ka e gbuo ya na GPU iji mee ngụkọta oge emere. Ọ na-eji n'ime CUDA, API nke na-ejikọ CPU na GPU nke NVIDIA mepụtara, nke na-enye ohere iji mee ka usoro mmemme nwayọ nwayọ dị ka ọzụzụ nlereanya.
A na-eji ya eme ihe na nyocha na mmepe na ngalaba nke mmụta miri emi, na-elekwasị anya na mmepe nke netwọk ntanetị, site na interface dị mfe.
PyTorch na-arụ ọrụ na eserese dị egwu karịa nke na-agbanwe agbanwe.
Ikwesiri ima asụsụ mmemme “Lua” iji ya.
Anyị nwere olile anya na ị dị "obere ma bara uru post" banyere ndị a 2 na-akpali «Plataformas de Inteligencia Artificial (IA) de Código Abierto» oku «TensorFlow y Pytorch», nke dị maka ugbu a, nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkachamara AI niile gburugburu ụwa na-arụ ọrụ, nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke okike, gigantic na eto eto nke ngwa nke na maka «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » TensorFlow na Pytorch: Ihe eji emeghe Open AI
Edge, ihe nchọgharị weebụ ọhụrụ nke Microsoft amalitela ịnakwere ndọtị
egrep: ihe atụ nke iwu na GNU / Linux